Igama elivamile: Oregano noma
Origanum I-Oregano ivela eNingizimu Yurophu naseMedithera eNyakatho Afrika.
Isitshalo se-Oregano sihlala isikhathi eside esikhula kuze kube ngu-500 mm ukuphakama futhi sinamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka. Lesi sitshalo sikhiqiza amagatsha amaningi ahlangothini lapho amaqabunga avela khona. Izimbali ezitholakala emagatsheni amagatsha ziba mhlophe, ezikhiqiza amafutha abalulekile kunazo zonke, noma ama-pink nokubomvu, okusetshenziselwa ikakhulukazi ngezinhloso zokugaya.
I-Oregano kokubili ifomu layo elisha nelomisiwe lisetshenziselwa izitsha eziningi zokudla njenge-flavouring.
Okunye okusetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile. Amafutha abalulekile asetshenziselwa ngaphandle nangaphakathi ukuze ahlinzeke ngamakhemikhali awo antimicrobial. Kuthiwa ukwelapha i-Candida, unyawo lomgijimi futhi kunciphise ukucasuka ngokulunywa kwezinambuzane futhi kungasetshenziswa njengendlela yokulonda izinambuzane.
I-Oregano ikhula kahle kakhulu emhlabathini ongenamhlabathi we-sandy loam nge-pH ephakathi kuka-6.5 no-7.5.
Ngaphambi kokuba kwenziwe ukulungiswa kwenhlabathi kwenziwa isampula yomhlabathi okumela kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zezakhi. Inhlabathi kufanele ikhonswe ukuze ikhulule iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-500 mm ukuqinisekisa ukudonsa okuhle.
Lungisa amazinga we-pH ngokungeza i-lime. Umquba noma umquba kufanele usetshenziswe futhi uhlungwe ungene emhlabathini ophezulu ka-400 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala zifaka izakhi zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselayo wokutshala umhlabathi emhlabathini, bese udilika phansi enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm. Lokhu kuzosusa nanoma yikuphi ukhula okungase lubekwe. Faka ukuchelela nokuhlanganisa uma kudingeka.
I-Oregano yisitshalo esivamile esiqinile esitshalo esikhula ezindaweni ezifudumele zaseMedithera futhi senza kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-16°C no-28°C. Ibuye ibekezelele iqhwa. Amazinga okshisa emhlabathini kufanele abe ngaphezu kuka-12°C ukuhluma okuhle noma ukusungulwa Nokulungiselela.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-oregano ezikhiqizwa ngokuthengisa. Ukukhethwa kwama-clones kusanda kunikwa kuqala ngoba ukubaluleka kwamafutha abalulekile kuye kwaqhutshwa ukukhiqizwa kwezohwebo. I-subspecies yama-pink nebomvu i-purple isetshenziswa ikakhulukazi ngezinhloso zokugaya kanye nombala omhlophe omhlophe osetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile.
Ezinye izinhlobonhlobo zitholakalayo yi-Aureum, i-Crispum, i-Country cream, i-leaf leaf, i-Gold tip, i-Nanum, i-Variegata ne-Zorba.
Kunezinye izinhlobo eziningi futhi kuyindlela evamile kakhulu yokuthola iseluleko se-extension officer kanye nongcweti yenzalo yezinhlobonhlobo ezingcono kakhulu endaweni yokukhiqiza kanye nemakethe okubhekiswe kuyo.